Esikhathini sethu sokuphila okunempilo, imithi yemvelo yemvelo noma okuthiwa yinto evamile kakhulu futhi iyathandwa, njengoba ingasizi nje ngezifo ezihlukahlukene, kodwa iphinde isekele isimiso somzimba sokuzivikela, ukwandise ithoni yonke yenyama yonke. Yini engasetshenzisiwe emithini yemvelo namuhla! Masikhulume ngezinto ezizuzisa zomkhiqizo onjalo wemvelo, njenge-lapaho-tea.
I-Lapaho-tea yi-cocktail yamaminerali abalulekile kakhulu kanye nezakhi zokulandelela. Umphumela weti lapaho emzimbeni womuntu uwusizo ezifweni eziningi. Isibonelo, itiye lefosholo liphumelela ekwelapheni izifo zesikhumba eziphikisanayo.
Isetshenziselwa ukuvimbela umfutho wegazi ophakeme, isifo sokuqina kwamathambo, umdlavuza nesifo sikashukela. Kuyini i-lapaho?
Isihlahla se-lapaho sikhula eNyakatho naseNingizimu Melika. I-Incas yayilungisa itiye lakhe lokwelapha, eliye lasiza ekulwa nezifo ezihlukahlukene. Inzalo yabo yayisetshenziselwa ukugoba ngaphakathi kwamagxolo okugaya izihlahla. Ukwenza lokhu, izingcezu zegxolo zihlutshiwe ngokucophelela, zimanzi futhi zisetshenziswe endaweni ewonakele. I-calla yaseBrazil isebenzisa itiye lapaho njengendlela yokwelapha i-leukemia nezinye izifo zomshukela. Kodwa-ke, i-lapaho ayitholanga ukuthandwa okukhethekile phakathi kwabanqobi basePutukezi nabaseSpain, nakuba kusetshenziswa itiye elivamile.
Ngo-1967, intukuthelo enkulu yabangela ukuxoxisana nomprofesa wezokwelapha wase-Argentina uWalter Akkori. Usosayensi wabika ukuthi ngosizo lwetipa lahoho kungenzeka ukunciphisa ubuhlungu obungenakubekezelelwa kubaguli abaphethwe umdlavuza. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa itiye lapaho, banezinga eliphakeme le-hemoglobin egazini futhi bathuthukise ukujikeleza kwegazi. Imithi yanamuhla isacubungula izindawo zokuphulukisa ze-lapaha.
Ngezansi kukhona okuyinhloko, okuqinisekisiwe ngemithi, izakhiwo zetiyidi:
I-Lapaha-tea ibhekisela ekutholeni kwezokwelapha eminyakeni yamuva. I-naphthoquinones yayo igqugquzela isimiso somzimba sokuzivikela somzimba ukuba senze amangqamuzana angqamuzana amangqamuzana afanelekile asuse emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, i-lapaho-tea ivimbela ukumuncwa kwe-glucose emathunjini, ngakho-ke, kuyasiza ngesifo sikashukela. Ngokusho kwemiphumela yocwaningo leYunivesithi yaseMunich, i-lapaho-tea ithatha izifo ze-fungal emathunjini futhi, okubaluleke kakhulu, ibhubhisa amangqamuzana e-tumor esiteji sokuqala. I-substance yayo esebenzayo i-lapachol iyasiza ekuphatheni izifo zesikhumba ezikhuthele kakhulu, isibonelo, i-neurodermatitis, futhi ukusetshenziswa kwangaphakathi kweti ye-lapacho kufanele kuhlanganiswe nezingcindezi zangaphandle ezivela kuso.
Ukuze uphuze i-lapaho, okokuqala, udinga ukuqonda imithetho yokupheka i-lapaho-itiye.
Ngezingqimba ezinkulu ezine (0.25 amalitha) weti lapaho, thatha izipuni ezimbili ze-lapacho bark emhlabathini kanye nelitha elilodwa lamanzi. Bilisa amanzi, bese ufaka amagxolo bese uwaletha emathunjini. Bese unciphisa ukushisa, ubilise itiye eminye imizuzu emihlanu, ikhava bese uvumela ukuba uhlale imizuzu engu-15. Ekugcineni, ubunzima. Kungcono ukuthululela itiye endaweni ye-thermos ukuyiphuza ngesikhathi sishisa.
Ukuze ukwandise izakhiwo eziwusizo emzimbeni we-lapaho-itiye, kudingeka ufunde ukuthi ungayiphuza kanjani kahle.
Ukusebenzisa njalo itiye kusuka ku-lapaho kuvamile ukucindezela kwegazi, ukuphatha nokuvimbela ukuphefumula kwegazi, umdlavuza nesifo sikashukela. Ungaphuzi ngaphezu kwereyi elilodwa letiyi ngosuku, uluhlukanise zibe izingxenye.
UKUSEBENZISWA KWE-LAPAXO-TEA YOKUPHATHWA KWEZIKHONO ZOKUKHAKHA NEZINQUBO ZOKUQALA.
Ukusetshenziswa kwangaphandle kweti lapaho kuphumelela izifo zesikhumba ezinjenge-acne, eczema, ukhunta emilenzeni, i-dermatitis, ukushisa kwelanga, i-neurodermatitis ne-lichen. Ngaphezu kwalokho, i-lapaho ikhuthaza ukuphulukiswa kwesilonda. Kungaphandle ukuyisebenzisa kangcono ngendlela yokucindezela.
Letha ama-0.5 amalitha amanzi emathumba, uphonsa isipuni esisodwa se-lapaho cortex kuwo bese ubilisa ukushisa okuphansi imizuzu emihlanu. Umhluzi uhlanganiswe futhi ake ume imizuzu engu-15, bese ukhula futhi upholile.
Gcoba oyinyumba, ugoqwe ngeziqephu ezimbalwa, ucezu lwe-gauze noma i-tovas ku-lapaho-tea, ugoqa bese ubeka isikhumba esikhulayo sesikhumba, kusuka phezulu ugoqwe ithawula. Ukuze usebenzise i-compress, ungasebenzisa ucezu olukhulu lwendwangu yokotini, ulifake umlenze wakho noma ingalo yakho. Ubude benkambiso yimizuzu engaba ngu-20. Le compress ingenziwa izikhathi 2-3 ngosuku.
Lapho izifo zesikhumba zizuzisa ukugeza nge-lapaho. Thela u-1 litre eliqinile (eligcwele) umhluzi we-lapaho ebhodini eligcwele ngamanzi afudumele. Thatha lokugeza kabili ngeviki, ubude benqubo yimizuzu engu-15-20.
Indlela yokuphulukisa umkhuhlane ezindebeni ekhaya
Lokho abakushoyo ngempilo yezipikili kubantu
Iseluleko esihle sempilo yabesifazane
Ukwethuka kwe-anaphylactic kaningi kangakanani
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-rose quartz
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-nepheline
Iyini i-fistula nokuthi ingavelaphi?
I-Velvet Ebomvu: iresiphi elula yekhekhe elimangalisayo etafuleni lonyaka omusha
U-Jolie noThannton - ndawonye futhi?
Macaroni nge ushizi
Ingabe kufanelekile ukushintsha imisebenzi enkingeni?
Ukuphila komndeni kaDmitry Kharatyan
Igazi lokuhlaziywa ngesikhathi sokukhulelwa
Izimpawu emngcwabeni: yini engenakwenziwa ukuze ingenise inhlekelele entsha
Ukunciphisa i-zucchini namaqanda abhakawa ema-mushroom
Iwukuphela kwesikhangu seqhekekile. Ungayifaka kanjani?
I-Spaghetti ene-pesto ne-mozzarella sauce
Ukubingelela kusukela ngoSepthemba 1 kubafundisi: kusuka kubafundi nabazali, abathandekayo nabathintekayo behalalisela ozakwabo ku-prose nevesi
I-apricot pie ngendlela esheshayo
Ibhulabhisi lokugeza: ukwakheka kanye nezinhlobo
Amagama okuqanjwa kwezingane zethu asho ukuthini?
Kungani ungakwazi ukulala phambi kwesibuko: Qaphela, kukhona i-vampire yamandla endlini yakho